Infographics uye Vhidhiyo: Online Kutsvaga Maitiro Ekuongorora | Martech Zone
Muvhuro, April 15, 2013 Muvhuro, April 15, 2013 Douglas Karr
iAcquire yakaitisa matatu-chikamu kudzidza pamusoro pekuti vanhu vanozvibata sei online - vachigadzira infographics ye yekutsvaga maitiro, hunhu hwekufambisa uye magariro enhau. Mhedzisiro yakazara inogona kucherechedzwa mune ino infographic vhidhiyo:
iAcquire yakabatana na SurveyMonkey Vateereri yechidzidzo icho chinotipa inoitisa nzwisiso mumaitiro ekutsvaga.
Nemidziyo mbozhanhare ichiva musimboti muhupenyu hwevanhu, iAcquire yaida kuunganidza imwe nzwisiso yekuti vanhu vanoshandisa sei zvishandiso zvavo kuitisa kwavo kwezuva nezuva.
Nechikamu chekupedzisira, iAcquire yakabvunza vashandisi veinternet nezve mashandisiro avanoita zvemagariro muhupenyu hwavo hwezuva nezuva. Mhinduro dzavakaunganidza dzakapa data rinonzwisisika. Ona zvaunogona kudzidza nezve nzira iyo vashandisi vako vanobatana nayo nemagariro enhau.
Tags: iacquirehunhu hwekufambisayekutsvaga injini maitiromagariro enhautsvaga yekuongororaSurveyMonkey
Tekinoroji Yekubudirira Kwekutengesa Kugonesa